Onye na-ebuputa ngwa ahia nke ulo akwukwo China
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:Ulo akwukwo ihe okike, bọọdụ ojii,ụlọ akwụkwọ ọta akara,ụlọ akwụkwọ kọleji, ụlọ akwụkwọ ọta akara,nkuzi nke klas
Home > Ngwaahịa > Ngwa nkuzi nke ụlọ akwụkwọ
Ngwaahịa nke Ngwa nkuzi nke ụlọ akwụkwọ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ulo akwukwo ihe okike , bọọdụ ojii suppliers / factory, wholesale high-quality products of ụlọ akwụkwọ ọta akara R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Buruo Ike Magnetiki Whiteboard Maka Ulo akwukwo
Ego ọnụ ọnụ klaasị ụmụ akwụkwọ klas nke ụlọ akwụkwọ
Ikwu kpochapu nkocha akpukpo ahihia magnet Green Green School
Buruo Ike Magnetiki Whiteboard Maka Ulo akwukwo Ihe No.MRWT-NM50 Portable Magnetic Whiteboard bụ ụdị bọọdụ na- agbanwe agbanwe, mfe , gbagọrọ agbagọ, kpụkọrọ akpụkọ, bee ma ọ bụ nwee ike ịbugharị n'ime ihe ọ bụla dịka ihe ndozi. Vingchekwa ohere ma buru ibu n'ụzọ dị mfe. N'otu oge ahụ, ọ nwere ndọta, dị...
Ego ọnụ ọnụ klaasị ụmụ akwụkwọ klas nke ụlọ akwụkwọ Anyị na ngwaahịa School klas Childrens Magnetik bọọdụ, EN71 Ma RoHS Dabara, ọ won`t ime ka he ma ọ bụ mmerụ na bụ nchebe aka n'ihi na ọ na doesn`t nwere h Ad na s harp nkuku ma ọ bụ n'ọnụ ya. Ihe NkeBBCKP-NS50-PSA Self Nrapado Whiteboard bụ ụdị mgbanwe...
Ikwu kpochapu nkocha akpukpo ahihia magnet Green Green School Kpochapu Mpempe Chalkboard Igwe Igwe Nke Igwe No.GCKP-NM50 bụ ụdị dị iche iche na-agbanwe agbanwe, agbachasị agbagọ, agbagọ agbagọ agbagọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịbugharị n'ime ụdị ọ bụla. Yabụ nke ahụ dabara adaba maka kọbọd ọ bụla. N'otu oge ahụ,...
China Ngwa nkuzi nke ụlọ akwụkwọ Ngwa
Matte dere bọọdụ bọọdụ maka nkuzi na ide ihe nke mepụtara maka nkuzi enweghị nku na ụlọ akwụkwọ praịmarị na nke sekọndrị. O nwere ike imeghari ka odide na nhichasị ụdị nke mkpịsị akwụkwọ dị iche iche, yabụ, dee ọfụma ọfụma wee hichaa enweghị ntụ na nsị. Nwere ntụpọ magnetik dị elu, adsorption siri ike, nwere ike ịdụnye ya ozugbo n'elu chalkboard ochie iji mezuo ebumnuche kwalitere nzu ochie ahụ.
Ulo akwukwo ihe okike
ụlọ akwụkwọ ọta akara
ụlọ akwụkwọ kọleji
nkuzi nke klas
Nwa akwukwo Ikea
Ulo akwukwo ihe okike bọọdụ ojii ụlọ akwụkwọ ọta akara ụlọ akwụkwọ kọleji nkuzi nke klas Nwa akwukwo Ikea